Zimbabwe Election: Robert Mugabe Wins Vote, Electoral Committee Announces – Zimbabwe Daily
HARARE, Aug 3 (Reuters) – Africa’s oldest president, Robert Mugabe, was declared winner of Zimbabwe’s election on Saturday, but his rival, Morgan Tsvangirai, said he would challenge in court a result he called a fraud that would push the nation back into crisis.
Given the sanctions, the reaction from the West will be key to the future of Zimbabwe’s economy, which is still struggling with the aftermath of a decade-long slump and hyperinflation that ended in 2009 when the Zimbabwe dollar was scrapped. (Additional reporting by Stella Mapenzauswa in Harare, Xola Potelwa in Johannesburg, Adrian Croft in Brussels and Arshad Mohammed in Washington; Writing by Cris Chinaka and Pascal Fletcher; Editing by Pascal Fletcher and Sonya Hepinstall)
In this Wednesday, July 31, 2013 photo, voting takes place by candlelight in Harare. President Robert Mugabe’s ZANU PF party said Thursday, Aug. 1, 2013, that it has withdrawn an unauthorized message on its Twitter feed claiming a resounding victory in the country’s national elections. (AP Photo/Clarissa Sosin)
Voters look at posted results outside a polling station in Harare Thursday, Aug. 1, 2013 President Robert Mugabe’s ZANU PF party said Thursday, that it has withdrawn an unauthorized message on its Twitter feed claiming a resounding victory in the country’s national elections. (AP Photo)
Ruling party ZANU PF supporters play soccer , Thursday, Aug. 1, 2013 in Harare, Zimbabwe. President Robert Mugabe’s ZANU PF party said Thursday that it has withdrawn an unauthorized message on its Twitter feed claiming a resounding victory in the country’s national elections. (AP Photo)
A woman smiles while she shops at a market in Domboshava, 60km north of Harare, on August 1, 2013. Vote counting is under way on August 1 after Zimbabwe’s tightly fought election which regional observers said was ‘orderly and fair’ despite charges of vote-rigging by allies of veteran President Robert Mugabe. (ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)
Vendors sit at a market in Domboshava, 60km north of Harare, on August 1, 2013. Vote counting is under way on August 1 after Zimbabwe’s tightly fought election which regional observers said was ‘orderly and fair’ despite charges of vote-rigging by allies of veteran President Robert Mugabe. (ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)
A vendor sits at a market in Domboshava, 60km north of Harare, on August 1, 2013. Vote counting is under way on August 1 after Zimbabwe’s tightly fought election which regional observers said was ‘orderly and fair’ despite charges of vote-rigging by allies of veteran President Robert Mugabe. (ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)
A woman carries tomatoes at a market in Domboshava, 60km north of Harare, on August 1, 2013. Vote counting is under way on August 1 after Zimbabwe’s tightly fought election which regional observers said was ‘orderly and fair’ despite charges of vote-rigging by allies of veteran President Robert Mugabe. (ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)
A child carries a bunch of firewood near a market in Domboshava, 60km north of Harare, on August 1, 2013. Vote counting is under way on August 1 after Zimbabwe’s tightly fought election which regional observers said was ‘orderly and fair’ despite charges of vote-rigging by allies of veteran President Robert Mugabe. (ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)
Previous PostZimbabwe President Robert Mugabe reelected; opponents cry foul
Next PostMugabe Declared Winner in Zimbabwe
Harare Poly Student Suspended After Being ‘Caught’ Hugging Fellow Student
Zimbabwe, US not talking: Chinamasa
HARARE, Aug 3 (Reuters) - Africa's oldest president, Robert Mugabe, was declared winner of Zimbabwe's election on Saturday, but his rival, Morgan Tsvangirai, said he would challenge in court a result he called a fraud that would push the nation back into...